Saturday January 15, 2022 - 09:54:52 in Articles by Hadhwanaag News
Qalinkii: SadamOsman Kaabash.
Jirrooyinka ilkaha ku dhaca, ee aadamuhu ka caban jireen waxay soo jireen muddo dheer. Xanuunada ilkaha cirridka iyo afku waxay ahaayen dhibaato weyn oo dadku ka cawdaan. Taariikda la haayo, daawaynta xanuunada ilkaha iyo afku waxay ka soo bilaabmaysaa boqortooyadii masaarida. Dhiganayaasha laga qoray boqoqrtooyadii Masaarida waxay sheegayaan in masaaridu ay daawayn jireen bararka cirridka iyaga oo isticmaalaya toonta. Qofkii ugu horreeyey ee daaweeya xanuunada ku dhaca ilkuhu waxa uu ka soo jeeda boqortooyada Masar. Taas oo loo yaqaano, "Dhakhtarkii iliga”.
Cilmiga Caafimaadka ilkaha ee casriga, waxa uu horumaray qarnigii 17-aad, isaga oo ka soo bilaabmay wadanka faransiiska. Waxaanay ahayd markii Pierre Fauchard, uu daabacay dhiganihiisii la magac baxay "THE SURGEON DENTIST”. Waxa uu ahaa dhiganihii ugu horreeyey ee laga qoro cilmiga ilkaha. Dhiganahani, waxa uu xoogga saarayay caafimaadka ilkaha iyo xanuunada haleela, iyo qaababka loo ilaaliyo caafimaadka ilkaha, iyo in caafimaadka ilkuhu yahay qab gaara oo sideeda loo baran karo. Dr,. Pierre Fauchard, waxaa loo aqonsaday aabaha cilmiga casriga ah ee ilkaha.